kawnmon @ wiki - アットウィキ
kawnmon @ wiki
ဖေဖေ။မေမေ။ သမီးသတိရစွာနှင့်စာရေးလိုက်ပါတယ်။ စာရေးဘို. အမြဲစိတ်ကူးရှိပေမယ့်တော်တော်နှင့် မရေးဖြစ်ဘူး။ တနေ.တနေ. အချိန်ကုန်တာအရမ်းမြန်တာပဲ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာလို လက်နဲ.စာမရေးတာ အကျင့်မရှိသလောက်ဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဖေဖေမေမေကိုရဲတိုးတိုး မိသားစုအားလုံးနဲ. ဆွေမျိုးအားလုံးကို သတိရနေပါတယ်။ အားလုံးနေကောင်းကြရဲ.လား။
ရန်ကုန်မှာအခု မိုးတော်တော်ရွာမှာပေါ.။ ဒီမှာက နွေရာသီ။အခုရက်ပိုင်း ကတော့ အပူချိန် ၃၂လောက်ရှိတယ်။ တော်တော်ပူတယ်။ ဒါပေမယ့် ၅လပိုင်းကနေ ၇လပိုင်းလကုန်လောက်ကို မိုးရွာတဲ့ကာလလို.ခေါ်တယ်။ အခု၈လပိုင်းရောက်တော့ မိုးရွာတဲ့ကာလပြီးသွားပြီလေ။နွေရာသီထဲက မှာ ရှိတဲ. မိုးကာလ ဆိုတဲ. အဓိပ္ပါယ်မျိုးပေါ.။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိုးရွာတဲ့ကာလစတဲ့အချိန်နဲ. ပြီးတဲ့အချိန်ကို သတင်းကြေငြာတဲ့အချိန်မှာပြောတာ။ တကယ်ကတော့ ပုံမှန်တစ်နှစ်လုံးလည်းမိုးကတော့ ရွာလေ.ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်လောက်တော့ မိုးမများပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သမီးက ရုံးပိတ်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးဖွင့်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မိုး ရွာရင် သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို.လည်းဆိုတော့ ရှူးဖိနပ်အကောင်းစားမဟုတ်ရင် ဖိနပ်ထဲကို ရေ၀င်တယ်လေ။ ပြီးတော့ ကလေးနဲ.သွားရတာဆိုတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူးပေါ.။
သမီးက စနေတနင်္ဂနွေနဲ. ပွဲတော်ရက်အခါကြီးရက်ကြီးတွေဆိုပိတ်တယ်လေ။ သားတို. မူကြိုတွေကတော့ ကြားရက်မဟုတ်တဲ.နေ.တွေမှာလည်း ဖွင့်ပေးတယ်။ မနက်၇နာရီကနေ ည၁၀နာရီအထိ သွားထားလို.ရတယ်။ ပုံမှန် ကျောင်းချိန်ကတော့ မနက်၈နာရီကနေ ညနေ၆နာရီအထိ။ အဲဒီအချိန် အတွက်ကပုံမှန်ကျောင်းလခ။ တခြား အချိန်တွေအတွက်ဆိုရင် ကြိုပြီးအကြောင်းကြားထားပြီး ပိုက်ဆံလည်း ဈေးကြီးကြီး ပေးရတယ်။ ထမင်း ဘိုးလည်းသတ်သတ်ထပ်ပေးရတယ်။ ပုံမှန်လခပေးထားတဲ.ပုံမှန်ကျောင်းချိန်မှာတော့ နေ.လည်စာ။ သားရေစာတွေ ကျောင်းကကျွေးတယ်။ ကျောင်းအပို.ကိုတော့ သမီးကနေ.တိုင်းပို.တယ်။ အကြိုက တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနဲ. ကြာသပတေးကို သူ ၊ သမီးက အင်္ဂါနဲ. သောကြာ။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော့ သူ ကတစ်ပါတ်မှာနှစ်ရက် က ည၉နာရီအထိအလုပ်လုပ်ရတယ်လေ။ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက သမီးလည်း အလုပ်ကညအထိလုပ်နေရတော့ သာငယ်ကို ည၈နာရီမှကြိုဖြစ်တယ်။ အိပ်ရာနိုးတာနဲ.အိမ်ကထွက် ပြန်ရောက်တာနဲ. နောက်နေ.အတွက်
ပြင်ဆင်ပြီး အိပ်သလိုဖြစ်နေတယ်။ ကြားရက်တွေမှာသမီးရဲ့ တစ်နေ.တာအလုပ်က အချိန်တောင် လောက်သလိုဖြစ်နေတယ်လေ။ မနက်ဆို၇း၀၀နာရီမှာအိပ်ရာထတယ်။ သူ.အတွက်မနက်စာ နွားနို.တစ်ခွက်နဲ. မုန့်နဲ.ပြင်ပေးပြီး အ၀တ်အစားထုတ်ပေး။ သူက ၇နာရီ၂၀ မှာအိမ်ကထွက်တယ်။ လမ်းသွားရင်ဘုရားစာဆိုဘို. အမြဲပြောရတယ်။ သမီးရန်ကုန်မှာ မနက်အိမ်ကထွက်ကာနီးဖေဖေမှာတာတွေ ကို သတိရတယ်။ သူသွားတာနဲ.
ဘုရားသောက်တော်ရေကပ်၊ ညကလှန်းထားတဲ. အ၀တ်တွေရုပ်၊ ညကရေခဲသေတ္တာထဲထဲ့ထားတဲ. သမီးထမင်းဘူးကို ရုံးသွားမယ့်အိပ်ထဲထဲ. ၊ မျက်နှာသစ် ပြင်ဆင်အ၀တ်လဲ ပြီး၊ သားအတွက်မနက်စာပြင်တယ်၊သားကို ၇နာရီခွဲမှာနှိုးတယ် တစ်ခါတစ်လေ ချက်ချင်းမထချင်ဘူး၊ ဖင်ဗူးတောင်းထောင်လိုက်သမီးကို မှီထိုင်လိုက်နဲ. ပြန်နှပ်ချင်နေသေးတယ်။ တီဗွီရှေ့က ထမင်းစားပွဲကိုချီလာပြီး တီဗွီကို ကလေးအစီအစဉ်ပြောင်ပေးရတယ်။ အဲဒါပြရင်း မနက်စာကျွေးရတယ်။ မနက်စာက ဆန်ပြုတ် ဒါမှမဟုတ် သမီတို.ငယ်ငယ်က စားခဲ့သလိုမျိုးကရက်ကာဘီစကစ်ကို နွားနို.စိမ်ပြီးကျွေးတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ အသီးတစ်မျိုးပါကျွေးတယ်။ ထမင်းကျွေးရင်းနဲ.ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းပြီး သူ.ရဲ.တစ်နေ.တာမှတ်တမ်းမှာ မနက်စာစားချိန်နဲ. အပူချိန်။ ညနေကြိုမယ့်အချိန်၊ ဘယ်သူ ကြိုမယ်ဆိုတာရေးဖြည့်ရတယ်။ ရေပါတ်တိုက်ပေးပြီးကျောင်းသွားဘို. အင်္ကျီလဲပေးတယ်။ ပြီးတော့ သူ. လှည်းပေါ်တင် သူ.ရဲ.မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို သူ.ကျောင်းအိပ်ထဲထဲ. ။ လှည်းမှာချိတ် ၊ သမီးအိပ်တွေယူ မီးပိတ်တစ်ခါးပိတ်ပြီး အိမ်က ထွက်ကြတယ်။ အိမ်ကထွက်တော့ ၈နာရီ၊ သူ ဂျီကျတဲ.နေ.ဆိုရင် ၈နာရီ ၁၀မိနစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်။
သားငယ်လေးကျောင်း ကို အိမ်က ၂မိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ရတာ။ ကျောင်းပို.ပြီးတာနဲ. ကျောင်းရှေ.က ဘူတာကို ပြေးပြီး မီတဲ.ရထားနဲ. ရုံးကိုပြေးတယ်။
မနက်၇နာရီက ဂနာရီမှာ အဲဒါတွေကို ပြီးအောင်လုပ်ရတယ်။သားငယ်လေးကလည်းလိမ္မာပါတယ်။ မနက်စာကို နေ.တိုင်းလိုလို ကုန်အောင်စားတယ်။ နာရီဝက်လောက်နဲ. အားလုံးပြီးအောင် သူလည်းလိုက်လုပ်ရှာပါတယ်။
အိမ်ကထွက်ကာနီး တီဗွီပိတ်တာတို. မီးပိတ်တာတို.ကို သူ.လက်ကလေးနဲ. နှိပ်ခိုင်းတယ်။ အကျင့်ရပြီး နားလည်သွားအောင်လို.လေ။ တစ်ခါတစ်လေ ချီထားတဲ.အချိန်ဆို ဓါတ်လှေခါးခလုတ်တွေနှိပ်ခိုင်းတယ်။ သူ.က ဟန်းဖုန်းကို အရမ်းပြောချင်တယ်လေ။ သူ.အလုပ်က လူကြီးက သားအတွက် ကစားစရာ ဟန်းဖုန်းလက်ဆောင်ပေးတယ်။ အဲဒါကို ကစားစရာမှန်းသိတယ်၊ သိပ်မကိုင်ချင်ဘူး။ သမီးတို.ဖုန်းတွေကိုပဲ ကိုင်ချင်တာ။ ဖုန်းခလုတ်တွေကို လည်း လူကြီးတွေနှိပ်တဲ.အတိုင်း လက်တစ်ဖက်ထဲနှင်. ကိုင်နှိပ်နှိပ်တာ။ ခလုတ်တွေပေါ်မှာ လက်မ ကို မခွါပဲ ဟိုရွေ.ဒီရွေ.နဲ. နှိပ်တာလေ။ အကုန် အတုခိုးတပ်တယ်။
သမီးတို. အိမ်ကနေရုံးအထိကို မြေအောက်ရထားနဲ.သွားရတယ်။ သမီးတို. အိမ်ရှိတဲ. ဘူတာကို ရထားလိုင်းက တစ်လိုင်း ပဲရှိတယ်။ အဲဒီထဲကတစ်လိုင်းထဲမှာ အနှေး(ဘူတာစဉ်ရပ်)နဲ့အမြန် (ဘူတာကျော်ရပ်)နှစ်မျိုးပေါ့။ သမီးတို.ဘူတာက နှစ်မျိုးလုံးရပ်တယ်။ ရုံးကို အမြန်နဲ.သွားရင် ၇မိနစ်။ အနှေးဆို ၁၂မိနစ်လောက်ပဲ။ အသွားက တော်တော်ကြီးကို ကျပ်တယ်။ ရန်ကုန်က ဘတ်စ်ကားကြပ်တာထက် ကြပ်တယ်လို.ပြောလို.ရတယ်။ သမီးက အမြဲလိုလို စောစောရောက်တဲ.ထဲမှာပါတယ်။ ရုံးမှာ ပြီးခဲ့တဲ.၃လပိုင်းကနေ ၆လပိုင်းအထိ၊ အလုပ်တာဝန်အသစ်ကို လုပ်ရတယ်။ တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ. အလုပ်ဖြစ်တာရယ်၊ တာဝန်ကြီးတာရယ်၊ အလုပ်အရမ်းများတာတွေကြောင့် တော်တော်လေးစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်။ နေ.တိုင်း အန်တယ်။ အခုတော့ ရုတ်တရက်ကြီး အလုပ်ကမရှိသလောက်နည်းသွားပြန်ပြီ။ စီးပွါးပျက်ကတ်ဆိုက်နေချိန်ဆိုတော့ အလုပ်မရှိရင် မကောင်းဘူး၊ အလုပ်ရှုတ်တာကမှ စိတ်ချရတယ်လို.ထင်တယ်။ ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်မရှိတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မှာအလုပ်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်ခုစလုံးမကောင်းဘူးလေ။ ကုမ္ပဏီက ကုန်ကျစားရိတ်တွေအစွမ်းကုန်လျှော့၊ လူတွေလည်းလျှော့နေတယ်။ကိုယ့်နဲ.အနီးဆုံးက လူနှစ်ယော်ရှိပြီ။ အဲဒါကြောင့် အမြဲစိုးရိမ်နေရတယ်။ အခုကိုယ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကို နှစ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း အထင်ကြီးလို. အခုလောလောဆယ်က အလုပ်မြဲချင်တယ်လေ။ ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ရတာ ကာယအလုပ်ကော ဥာဏအလုပ်ကော အများအားဖြင့်က လူပင်ပမ်းပြီး စိတ်ဖိစီမှုများတယ်။ ကာယအလုပ်က လူပင်ပမ်းတာပိုများပြီး ဥာဏအလုပ်က စိတ်ပင်ပမ်းတာပိုများတယ်။ ဒါကို ခံနိုင်ရည်ရှိဘို. ကြိုးစားရတယ်။ နဲနဲကြိုးစားရင် နဲနဲအဆင်ပြေတယ်။ များများကြိုးစားရင်များများအဆင်ပြေတယ်လို.ပြောရမလိုပဲ။ နေ.တိုင်းနေ.တိုင်းလုပ်နေတဲ. အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်တာနဲ. မပြီးဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းအောင် ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို မစဉ်းစားနိုင်ရင် ရှေ.ဆက်ဘို. နေနေသာသာ၊ရောက်နေတဲ.နေရာကနေ မပျောက်သွားရင်ကံကောင်း တာပဲလို.ဆိုရမယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ သမီးလုပ်ရတဲ.အလုပ်က ဌာနနှစ်မျိုးကို လုပ်ဘူးးသွားပြီ။ စ၀င်ဝင်ချင်းကနေ မီးဖွါးခွင့် ယူတဲ့အထိက ဌာနတစ်မျိုး မီးဖွါးခွင့်ကနေ ပြန်လာတော့ ဌာနတစ်မျိုး။ ပထမဌာနမှာတုံးကလုပ်ကတဲ.အလုပ်က၊ ထိုင်းနှင့်မြန်မာပြည်အတွက် စာရွက်စာတမ်းမှန်သမျှကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊မြန်မာဘာသာကနေ ဂျပန်လိုဘာသာပြန်ပေးရတယ်။ အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်ရင်းကနေ ကုမ္ပဏီရဲ. တယ်လီဖုန်းလက်ခံ၊ ဧည့်ကြိုနှင့်ကုမ္ပဏီသူဌေးကို စက်ကတ်ကြေးလုပ်ပေးရတယ်။ ဘာသာပြန်တဲ.အလုပ်ရဲ. အတွေ.အကြုံကတော့ သမီးအတွက်သိပ်စိတ်ဖိစီးမှုမရဘူး။ ဒီအလုပ်က ကိုယ့်မှာအတွေ.အကြုံရှိပြီးသားလေ။ နောက်သက်သာတဲ့တစ်ချက်က ကုမ္ပဏီမှာ ၀န်ထမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ဘို. အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တစ်ယောက်ခန်.ထားတယ်။ သူနဲ.သမီးက အသက်တူတူပဲ။ နံမည်က ဂျက်စင် တဲ.။ ဂျပန်အမျိုးသမီးနဲ. အိမ်ထောင်ကျတာ ၆နှစ် ဂျပန်မှာနေတာ၇နှစ်ရှိပြီ။ သမီးနဲ.တော်တော်ခင်တယ်။ ဘာသာပြန်တာအခက်အခဲရှိရင် သူနဲ. တိုင်ပင်လို.ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ အရေးကြီးတဲ.စာရွက်စာတမ်းတွေပြန်ရတဲ. အခါဆိုရင်တော့ တာဝန်ကြီးတယ်။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ. စာချုပ်မချုပ်ခင် အကြမ်းကို ဟိုဘက်က အင်္ဂလိပ်လို ရေးတာကို ဂျပန်လိုပြန်၊ အဲဒါကို ကုမ္ပဏီသူဌေးကဖတ်၊ သဘောတူရင် အကြောင်းပြန်ပြီး အချောရေးထားတဲ. အင်္ဂလိပ်လိုစာချုပ်မှာ ကုမ္ပဏီသူဌေးကလက်မှတ်ထိုးတာပေါ.။ သမီးကမှားပြီးပြန်ခဲ့တဲ. အကြောင်းအရာရှိခဲ့ရင် တစ်နေ.ပြဿနာပေါ်နိုင်တယ်လေ။ ဧည့်ကြိုဆိုတာက ကုမ္ပဏီကို အလုပ်ကိစ္စနဲ.လာတွေ.တဲ. ဧည့်သည်တွေကို အပေါက်ဝမှာထွက်ကြို၊ ဧည့်ခန်းသို.မဟုတ်အစည်းအဝေးလုပ်မယ့် အခန်းကို လမ်းပြ၊ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီထဲကလူကြီးတွေကို ဧည့်သည်ရောက်ကြောင်းသတင်းပို.၊ ရေနွေးကြမ်းထုပ်ပေး၊ ပြန်သွားရင် သိမ်းဆည်းရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်အတွက်ပညာရတာကတော့ ပြောပုံဆိုပုံ၊ အမူအရာ၊ ရေနွေးကြမ်းထုပ်ပုံ၊ အခန်းအ၀င်အထွက်၊ ဆိုတာတွေကို ဂျပန်ပုံစံအတိုင်းအတုခိုးသင်ယူလုပ်ကိုင်ရတော့ သမီးအတွက်ပညာအများကြီးရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကတည်းက ဂျပန်ဧည့်သည်တွေနဲ. ဆက်ဆံခဲ့ရပေမယ့်၊ နောက်ထပ်မသိသေးတဲ.၊ သိပြီးမလုပ်ဘူးသေးတဲ.၊အကြောင်းအရာတွေကို လက်တွေ.လုပ်ကိုင်ရတော့ အလုပ်လုပ်ရတာ၊ ပျော်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ငယ်ငယ်တုံးက ကိုယ်မလုပ်တတ်ခဲ.တဲ့ မသိခဲ့တာတွေကို ပြန်သတိရလာတယ်။ ကိုယ်ရဲ.လိုအပ်ချက်တွေကို ပိုသိလာတာနဲ.အတူ၊ ကွာခြားချက်ကိုလည်း သိမြင်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ.သားကို ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ကိုယ်ဝန်၉လအထိအလုပ်ဆင်းခဲ့တယ်။ မီးဖွားခွင့်ယူပြီး၁လအကြာမှာသားကိုမွေးတယ်။ မီးဖွားပြီး ၂လအကြာမှာအလုပ်ပြန်ဆင်းတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အလုပ်ဌာနပြောင်းသွားတယ်။ အရင်သမီးလုပ်တဲ့ဘာသာပြန်တဲ. အလုပ်တွေမရှိတော့ဘူး။ နောက်ပြီး၊ စက်ကတ်ကြေးအလုပ်အတွက် ဂျပန်မငယ်ငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ခန်.လိုက်တယ်။ သူ.နံမယ်က အရားအိစံတဲ့။ အရားအိစံကိုသမီးခွင့်မယူခင်စခန်.ခဲ.ပြီး သမီးက သူ.ကိုအလုပ်လွှဲ၊အလုပ်သင်အနေနဲ. တစ်လ အတူလုပ်ခဲ.ရသေးတယ်။ သူဌေးက သူ.ကိုမခန်.ခင်မှာ သမီးကို၊ သမီးရဲ.အထက်လူကြီး အာအိုးကိဌာနမှူး နဲ.အတူ စကားခေါ်ပြောတယ်။ “မွန်စံ အလုပ်ကြိုးစားပြီးလုပ်တာကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ အခု စက်ကထရီအလုပ်ကို အသစ်မိန်းခလေးတစ်ယောက်ထပ်ခန့်မယ်။ မွန်စံ မီးဖွားပြီးပြန်လာရင် မွန်စံရဲ. ပညာအရည်အချင်းကို ပိုပြီးအသုံးချရမယ်. ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုပေးမယ်။ မီးဖွါ။ပြီးမြန်မြန်ရုံးပြန်တက်နော်လို.ပြောတယ်။ ရုံးပြန်တက်တော့ ၀န်ထမ်းခန့်ထားရေးနဲ. သင်တန်းပေးဌာနကို ပြောင်းရတယ်။ အဲဒီဌာနမှူးနံမယ်က တိုမီယာမစံ ပေါ.။ သူက ၀န်ထမ်းခန့်ထားရေးနဲ. သင်တန်းပေးဌာနမှုးလို. မပြောရဘူး နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာ လုပ်တာကိုင်တာစံပြပဲ။ သူ.လက်အောက်မှာသမီးအလုပ်လုပ်ရတာ ပညာအရမ်းရတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ သူ.ကို လူကြိုက်များတယ်။ ရိုသေကြတယ်။ သမီးရဲ.တာဝန်ကတော့ ကျောင်းပြီးလို.အလုပ်ဝင်မယ့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊အသက်မွေးပညာသင်ကျောင်းသား တွေကို အလုပ်ခန်.ဘို. အတွက် သမီးတို. ကုမ္ပဏီအကြောင်းမိတ်ဆက်တဲ.ဟောပြောပွဲစီစဉ်တာ၊ စာမေးပွဲကျင်းပတာ၊ လူတွေ.အင်တာဗျူးအတွက်စီစဉ်တာ၊တွေလုပ်ရတာပါ။ အလုပ်သဘောကတော့ မြန်မာပြည်နဲ.တူမလိုလိုနဲ. အရမ်းကွာခြားပါတယ်။ ဒီအလုပ်တွေကို အင်တာနက်အဓိကထားပြီးလုပ်တာလေ။ အလုပ်ခန်.ဘို. ဆုံးဖြတ်တာကလွဲလို. အားလုံးကို သမီးတစ်ယောက်ထဲလုပ်ရတယ်။ အလုပ်အရမ်းရှုပ်ပြီး သမီးအတွက်ကတေ့ာ တော်တော်တာဝန်ကြီးပါတယ်။ ၃လပိုင်းကနေ ၆လပိုင်းလကုန်လောက်အထိက တပါတ်ကို သုံးရက်လောက်ညအထိအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီလတွေမှာ နေ.လည်ထမင်းစားဘို.တောင် အချိန်မရှိဘူးလေ၊ ၁၅မိနစ်လောက်နဲ.နေ.လည်စာစားချိန်ကိုပြီးလိုက်ရတယ်။နောက် စနေ၊တနင်္ဂနွေတွေကိုတောင်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ယူလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ မနက်ကို အိမ်က ၈နာရီထွက်လာတာ ည၈နာရီ ၉နာရီလောက်မှပြန်ရောက်ပါတယ်။ အာရုံအရမ်းစိုက်ရပြီး အားချိန်မရှိလို ပင်းပမ်းပြီး၊စိတ်ဖိစီးမှု များပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလောက်မပင်ပန်းတော့ပါဘူး။ပုံမှန်ပါပဲ။ အလုပ်ခန်.တာက ရာသီနဲ.လေ။ ၇လလောက်ပါပဲ။ ကျန်တဲ.လတွေကတော့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေရဲ. သင်တန်းတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေကို စီစဉ်ရတာပေါ့။ ကုမ္ပဏီတွင်းသင်တန်းတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေကိုတော့ သင်မယ့်ဆရာနဲ. အချိန်ဇယားတွေကို စီစဉ်ပြီး ၀န်ထမ်းအားလုံးကို ကြေငြာချက်ထုတ်လူစု၊ မှတ်တမ်းတွေထားရတာပေါ့။ ကုမ္ပဏီပြင်ပသင်တန်းတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေကျတော့ အင်တာနက်ပေါ်ကနေရှာပြီး ကောင်းတာတွေ.ရင်ဌာနမှူးကိုတင်ပြ၊ ၀န်ထမ်းအားလုံးသိအောင်ကြေငြာချက်ထုတ်၊ အပြင်က သင်တန်းကျင်းပမယ့်နေရာနဲ. ဆက်သွယ်ပြီး မှတ်ပုံတင်တာတို.၊ ပြီးသမျှကိုမှတ်တမ်းတွေနဲ.သိမ်းတာတို.လုပ်ရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတဲ.ပမာဏက မများပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း အတော်သတိထားရပါတယ်။ နောက်ကြေငြာချက်ထုပ်တဲ. အီးမေးလ်တွေကို ရေးတဲ့အခါစာအရေးအသားကို အမြဲ စိတ်ပူပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဂျပန်မ တစ်ယောက်ကပြောဘူးတယ်။ အဲဒီလိုကြေငြာချက်အီးမေးလ်တွေကို ရေးရတာ ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်တောင် တော်တော်သတိထားရလို. သမီးလိုနိုင်ငံခြားသားအနေနဲ. ပိုပြီး အာရုံစိုက်ရ၊ စိတ်ပူရတာပေါ.တဲ.။
အလုပ်ဘယ်လောက်များများ ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဘယ်လောက် ကြီးကြီး ၊ သမီးကတော့ အခုလုပ်နေရတဲ.အလုပ်ကိုပျော်လည်းပျော် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ ပညာအများကြီးရပြီး ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ. အလုပ်နဲ.ပါတ်သက် စိတ်ဓါတ်နဲ. ခံယူချက်ကို ပိုပြီးသိလာရလို.ပါပဲ။